प्रकाश पुनमगर बागलुङ जिल्लाको पाण्डवखानी-७ लेंगुरेमा पिता शशिराम पुनमगर र माता भीमा पुनमगरको कोखमा जन्मेका हुन्। २०६६ सालदेखि चलचित्र क्षेत्रमा होमिएका प्रकाशले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०६५ सालमा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर एम।बि।एस। गरिसकेका छन्। मगर जातिको भाषा धर्म कला र संस्कृतिको संरक्षणमा आफूलाई समर्पित गर्दै आएका पुनमगरले वर्तमान समयमा मगर जातिको एकता अपरिहार्य रहेको धारणा राख्छन्। मगर कला र संस्कृतिमा आधारित उनको पहिलो चलचित्र मायाको गाउँ यतिखेर नेपालका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रभात फिल्म प्रा.लि. को पहिलो प्रस्तुती उक्त चलचित्र हालसम्म काठमाडौं पोखरा बागलुङ गलकोट लगायतका ठाउँहरुमा प्रदर्शन भइसकेका छन् भने अन्यत्र पनि प्रदर्शनको तयारीमा छ। चलचित्र र समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीः
चलचित्र क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
म आफैं एउटा सिर्जनालाई मन पराउने मान्छे र चलचित्रमार्फत् आफ्ना सिर्जनालाई दर्शकमाझ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ यस क्षेत्रमा प्रवेश गरें।
यस चलचित्रमा जातीय कथावस्तुलाई जोड्नुको कारण ?
चलचित्र आफैंमा एउटा कला र संस्कृतिलाई प्रस्तुत गर्ने राम्रो माध्यम हो। त्यसमा पनि म आफू नेपालको एक प्रमुख आदिवासी जनजाति समुदाय मगरको सन्तान भएका नाताले यसमा मगर जातिको कला र संस्कृतिलाई पस्कनु उचित ठानें। चलचित्र भनेको सबैले बुझ्ने एउटा सजिलो माध्यम पनि भएकाले मैले मगर जातिको कथावस्तुलाई यसमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। जुनसुकै चलचित्रमा कुनै न कुनै पक्षलाई विषयवस्तुका रुपमा लिइएको त हुन्छ नै।
मायाको गाउँ कस्तो खालको चलचित्र हो ?
यो एउटा मगर कला र संस्कृतिमा आधारित नेपाली भाषाको सामाजिक फिल्म हो। यसमा अहिलेको परिवेशलाई युवा पुस्ताले आफ्नो जातिको कला संस्कृति र भाषालाई कसरी लिएका छन् अर्थात् अर्को अर्थमा भन्दा कला संस्कृति र भाषाप्रतिको युवाहरुको मायालाई यस फिल्ममा प्रस्तुत गरिएको छ।
मायाको गाउँ चलचित्र कहिले बनेको हो र कति समय लाग्यो ?
यो फिल्म बनाउनलाई दुई महिना लाग्यो। २०६६ सालको भदौ महिनामा सुरु भएर कात्तिक महिनामा निर्माण सम्पन्न भएको हो।
चलचित्रको छायाङ्कन चािहं कहाँ-कहाँ भएको छ ?
प्रायः जसो दृश्यहरु बागलुङ जिल्लाभित्र नै छायांकन गरिएका छन्। बागलुङको पाण्डवखानी गाउँ विकास समिति बागलुङ बजार र केही दृश्यहरु काठमाडौंमा छायांकन गरिएको हो।
चलचित्र निर्माण भैसक्दा सम्म कति खर्च लाग्यो ?
यो चलचित्र निर्माण भैसक्दासम्म करिब दश लाख रुपैयाँ जति खर्च भएको छ।
मायाको गाउँ चलचित्र किन बनाउनुभयो ?
यो मायाको गाउँ फिल्म मगर कला र संस्कृतिमा आधारित फिल्म हो। हामी मगरहरु कला र संस्कृतिमा धनी भएर पनि यसको संरक्षण र संवद्र्धनको अभाव महशुस गरी यो फिल्म बनाउने विचार गरेको हुँ। अर्थात् भनौं यो फिल्म बनाएँ।
यस चलचित्र निर्माणका क्रममा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
मानिस सामाजिक प्राणी हो। कुनै पनि समाज तथा जातीय उत्थानका लागि काम गर्दा खुशी लाग्नु स्वभाविक छ। काम गर्दा चाहे त्यो चलचित्र क्षेत्रमा भनौं वा कुनैपनि कार्यक्षेत्रमा मिहिनेत र इमान्दारिता आवश्यक हुन्छ। यो फिल्म बनाउँदा धेरै दुःख भयो तर पनि काम सम्पन्न भयो यसमा म खुशी छु।
तपाईले मगर भाषामा नभै नेपाली भाषामै यो फिल्म बनाउनुको कारण ?
हो यो फिल्म खस भाषामा तयार पारिएको छ। तर यस फिल्ममा हाम्रो जातीय भाषिक पहिचान मगर भाषा हामीले जान्नुपर्छ अनि नजान्नेले सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग उठाइएको छ। विशेषगरी पश्चिम बागलुङको पश्चिम निसी क्षेत्रमा मगर भाषा बोल्ने गरिएता पनि पूर्वी क्षेत्रमा नबोलिने र भाषा नबोलिएपनि मगर कला संस्कृतिलाई पूर्वी क्षेत्रका मगरहरुले जोगाइराखेका छन्। यही कला संस्कृतिलाई सबैको जानकारीसम्म पुर् याउने सोंचका साथ यसमा मगर भाषालाई स्थान नदिइएको हो। तर अभिलेख संकलनका लागि र आफ्नो भाषिक पहिचानका साथै मगर भाषाको स्तरोन्नतिका खातिर मगर भाषामा पनि यस फिल्मलाई तयार पार्ने सोंचमा छौं।
चलचित्र रिलिज भएपछि प्रदर्शनको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म काठमाडौं पोखरा बागलुङ गलकोट लगायतका ठाउँहरुमा प्रदर्शन भइसकेको छ भने अन्य ठाउँहरुमा पनि प्रदर्शनका लागि कुराकानी भइरहेको छ।
यस चलचित्रमा कुन कुन कलाकारको अभिनय छ अनि तपाईको भूमिका के छ ?
यस फिल्ममा म आफैं मुख्य नायकको भूमिकामा छु। र अन्य कलाकारहरुमा तारा पुनमगर अनिता गलामीमगर ऋतिका काउचामगर लगायत हुनुहुन्छ।
मायाको गाउँ चलचित्र दर्शकले किन हेर्ने ?
विशुद्ध मगर कला र संस्कृतिमा आधारित यो चलचित्र सम्पूर्ण मगर जसले कला र संस्कृतिलाई आफ्नो पहिचान ठान्नुहुन्छ। उहाँहरुले यो फिल्म हेर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु। नेपाली भाषामै भएका कारण यसमा गैरमगरहरुले पनि मगर जातिको कला र संस्कृतिबारे जानकारी लिनका लागि यो फिल्म हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अन्त्यमा यस वेबसाइट मार्फत् आम दर्शक शुभचिन्तकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो अभियान मेरो जातीय उत्थान र पहिचान स्थापित गर्नका लागि चलचित्रमार्फत् पहिलो प्रयास हो। देश-विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मगर तथा गैरमगर आमाबुबा दिदीबहिनी एवम् दाजुभाइहरुलाई मेरो यो पहिलो प्रयासलाई हेरी सल्लाह सुझाव र प्रतिकि्रया दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यहाँहरुको सल्लाह सुझाव र आशीर्वादले मलाई आगामी दिनमा अन्य चलचित्र निर्माणका लागि थप ऊर्जा र प्रोत्साहन मिल्नेछ। साथै मलाई यस लोकपि्रय अनलाइन मार्फत् आफ्नो चलचित्रको बारेमा र मनमा लागेका कुराहरु आम पाठक एवं दर्शकसामु प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा यस वेबसाइट परिवारलाई समेत धेरै-धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।